नेपाललाइ हे’प्ने भारतमा प्राकृतिक बि’नाश : बिमानस्थल चु’र्लुम्मै डु’ब्यो, ७२ जनाको ज्या’न ग’यो ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/नेपाललाइ हे’प्ने भारतमा प्राकृतिक बि’नाश : बिमानस्थल चु’र्लुम्मै डु’ब्यो, ७२ जनाको ज्या’न ग’यो !
काठमाडौं । भारतको पश्चिम बंगालमा अम्पुन आँ’धीले ७२ जनाको मृ’त्यु भएको छ । आँ’धीको कारण कोलकत्ता एयरपोर्ट ज’लमग्न भएको छ । आँ’धीले ५ हजार भन्दा बढी घर भ’त्काएको छ ।पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले अम्पुन आँ’धीका कारण करोडाैंको क्ष’ति भएको बताएकी छन् । आफ्नो जीवनकालमा यस्तो क’हालीलाग्दो आँ’धी कहिल्यै नदेखेको मुख्यमन्त्री बेनरजीको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीवट गरेर बंगालमा आँ’धीबाट जीवन गु’माउनेहरुप्रति श्र’दाञ्जली र शो’कसन्तप्त परिवारमा स’मवेदना व्यक्त गरेका छन् । बंगालको खाडीबाट आएको अम्पुन आँ’धी कोलकत्ता आइपुग्दा बुधबार १ सय ९० किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा रहेको भारतीय मौसम विभागले जनाएको छ । ऑ’धीका कारण आसाम, मेघालयमा समेत अ’सर गरेको छ । आँधीले कोलकत्ता विमानस्थलको छत ख’सेको छ ।
खोलाले ब’गाएर चितवनमा एकको मृ’त्यु